पेशाहरू – Word of Truth, Nepal
के तपाईं “आत्मिक भिखारी” हुनुहुन्छ? के दाऊद त्यस्ता थिए? दाऊदले भने, “म त ________ र ________ छु तरै पनि ______________ मेरो विचार गनुहुन्छः तपाईं मेरो सहायक हुनुहुन्छ” (भजनसंग्रह ४:१७)। दाऊद आफूलाई सहायता चाहिन्छ भनेर जान्दथे। दाऊदले उसलाई चाहिएको कुरा परमेश्वरसँग छ भनेर जान्दथे। आफू गरीब छु भनेर दाऊद जान्दथे र परमेश्वर धेरै धनी हुनुहुन्छ भनेर पनि। दाऊदले परमेश्वरबाट माग्न सिकेका थिए ।
येशूले भन्नुभयो, “आत्मामा ________ हुनेहरू धन्य हुन्: किनकि स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो” (मत्ती ५:३)। आत्मिक माग्नेहरू कति खुशी हुनेछन्, स्वर्गमा तिनीहरूका करुणामय राजा र प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तिनीहरूलाई जे खाँचो छ सो दिनुहुन्छ (मत्ती ७:७)।
सिकर्मीले धेरै उपयोगी कुराहरू बनाउँदछन् जस्तै हलो, जुवा (हेर्नुहोस् पाठ ६), छानाहरू, ढोकाहरू, मेच र कुर्सीहरू। तर पनि कहिलेकाहीँ सिकर्मीले आफ्नो सीपलाई बेठीक प्रकारको सामानहरू बनाउन प्रयोग गर्न सक्थ्यो। यशैया ४४:१३-१७ मा हेनुहोस्। त्यहाँ एउटा सिकर्मीको उल्लेख छ जसले आफूलाई न्यानो बनाउन काठलाई दाउराको रूपमा प्रयोग गर्दछ र आफ्नो खाना बनाउन पनि प्रयोग गर्दछ। तब बाँकी काठद्वारा उसले __________ बनाउँछ र यसलाई ____________ गर्छ” (१५ पद)। उसले यस काठको मूर्तिलाई प्रार्थना पनि गर्दछ (१७ पद) । के काठको टुक्राले प्रार्थनाको जवाफ दिन सक्छ? __________। के काठको टुक्राले मानिसको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ? ___________।
नहेम्याहले भने, “किनकि म राजाको ________________ थिएँ ” (नहेम्याह १:११)। नहेम्याहले फारसका राजालाई पिउने कुराहरू टक्राउँथे (नहेम्याह २:१)। के फारसका राजाले नहेम्याहलाई विश्वास गर्थे? ____________।
आज धेरै मानिसहरू मनोरन्जनका लागि माछा मार्छन्। नयाँ नियमको समयमा माछा मार्ने काम एउटा पूर्णकालीन पेशा थियो। मछुवाहरू धेरै कडा परिश्रम गर्थे र कहिलेकाहीँ तिनीहरू ________ भरि पनि मेहेनत गर्थे” (लुका ५:५)। यसरी नै तिनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्थे।
यी मछुवाहरूलाई येशूले भन्नुभयो, “मलाई ______________ र म तिमीहरूलाई ______________ ______________ बनाउनेछु” (मत्ती ४:१९)। माछा समात्‍नुको सट्टामा तिनीहरूले ________________लाई समातेको येशूले चाहनुभयो (लुका ५:१०)। माछालाई जालमा पक्रन (प्रवेश गराउन) तिनीहरूले समय बिताउनुभन्दा, तिनीहरूले आफ्नो समय मानिसहरूलाई __________ को ____________ प्रवेश गराउनको लागि समय बिताएको येशूले चाहनुभयो (मत्ती १९:२४)। पेन्टेकोष्टको दिनमा यिनै मध्ये एक मछुवाले उठेर ठूलो भीडलाई प्रचार गरे (प्रेरित २:१४)। कतिजना मानिसहरू त्यस दिन समातिए (प्रेरित २:४१)? ________________।
यदि तपाईं एउटा काल्पनिक “समय-यन्त्र” पस्नु भई प्राचीन बाइबलीय समयका घरहरूमा पुग्न सक्नुभएको भए त्यहाँ पनि तपाईंले धेरै किसिमका भाँडाहरू देख्‍नुहुनेथ्यो। यी मध्ये धेरै माटोबाट बनिएका पाउनुहुनेथ्यो। ती भाँडाहरू कुमालेद्वारा बनाइन्छ।
यशैया ६४:८ अनुसार, कुमाले को हो? ________________। माटो को हो? ___________। परमेश्वर हामीलाई लिन, मोड्न र एउटा अचम्मको आकार दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई “आफ्नै पुत्रको _______” ढाल्न चाहनुहुन्छ (रोमी ८:२९)। तर माटोले कुमालेलाई उसकै इच्छाअनुसार गर्न दिनुपर्छ! माटो नरम हुनुपर्छ र कुमालेले जे गर्न चाहन्छ सो गर्न दिनुपर्छ! के एउटा माटोको डल्लाले, “रोक्नुहोस्! म कचौरा बन्न चाहन्नँ, म पानी राख्‍ने सुराही बन्न चाहन्छु!” भन्दछ र? रोमी ९:२०-२१ सँग तुलना गर्नुहोस्। उसले त्यसो भन्दैन, किनकि कुमाले त मालिक हो!
परमेश्वरका भेंडाहरू को हुन् (भजनसंग्रह १००:३; ७९:१३)? ______________________। असल गोठालो को हुन् (यूहन्ना १०:११,१४)? ____________________। कस्तो किसिमको व्यक्तिले, “परमप्रभु मेरा गोठालो हुनुहुन्छ” (भजनसंग्रह २३:१) भन्न सक्छ? के यो सबैजनाले भन्न सक्दछन् अथवा बचाइएका विश्वासीहरूले मात्र भन्न सक्दछन्?
विश्वासी नगरेकाहरू कस्ता भेंडाहरू हुन् (यशैया ५३:६)? ______________। कुन अर्थमा विश्वासीहरू भेंडाहरू हुन्? कुन अर्थमा परमेश्वर गोठालो जस्तै हुनुहुन्छ? परमेश्वरका भेंडाहरूले कुन दुई कुराहरू गर्छन् (यूहन्ना १०:२७)? “मेरा भेंडाहरूले __________________________________ र म तिनीहरूलाई चिन्छु र तिनीहरूले ________________________________________”। के तपाईं गोठालोको आवाज सुन्नुहुन्छ?____________ कसरी? के तपाईं गोठालोलाई पछ्याउनुहुन्छ? यी भेंडाहरू कति सुरक्षित छन् (यूहन्ना १०:२८-३०)? ______________________। भेंडाहरूमाथि निगरानी राख्‍नु र तिनीहरूको सुरक्षा गर्नु कसको जिम्मेवारी हो? के यो भेंडाले गर्नुपर्ने कार्य हो कि गोठालोले गर्ने कार्य हो?
१. दास उसको मालिकद्वारा किनिएको हुन्थ्यो। ऊ सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो मालिकको हुन्थ्यो। मालिकले, “तँ मेरो होस्” भन्न सक्थ्यो।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 16:21:292020-04-28 14:23:02पेशाहरू
पशुहरूपैसा र सम्पत्तिहरू